Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Wakiilka Somaliland ee Itoobiya
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo oo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Wakiilka Somaliland ee...
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta salaaddii duhur kadib soo saaray wareegto uu ku magaacay guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Wakiilka Somaliland u fadhiyaya Itoobiya.
Aadan Xaaji Cali Axmed oo muddo dheer bare sare ka ahaa Jaamacadda Hargeysa, isla markaana mar ahaa hormuudka Kulliyada Sharciga ee Jaamacadda Hargeysa ayaa loo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland.
Aadan Xaaji wuxu sidoo kale muddo dheer ku soo jiray bulshada rayidka ah isagoo laba sanno guddoomiye ka ahaa Dallada Jilayaasha aan Dawiliga ahayn “SONSAF”.
Muddooyinkii u dambeeyey Aadan Xaaji Cali wuxu ka mid ahaa saddex qof oo warbaahintu saadaalisay in midkood loo magacaabi doono Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Dhanka kale, Madaxweynuhu wuxu Maxamuud Aaden Jaamac Galaal u magacaabay Wakiilka Somaliland u fadhiya Itoobiya .
Jagada wakiilka Itoobiya ayaa bannaanayd ku dhawaad sannad kadib markii Aadan Nuux Dhuule xilka laga qaaday.
Hoos ka akhri war-saxaafadeedka oo dhammaystiran.
Date: – 24 /05 /2015
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo sumadeedu tahayJSL/M/XERM/249-3319/052015 uu ku magacaabay Gudoomiyaha Maxkamada sare iyo safiirka Somaliland u fadhiya dalka Ethiopia.